Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်)
Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Natrilix® ကို သွေးတိုးခြင်းကို ကုသရန် တစ်မျိုးတည်း သို့မဟုတ် တခြားဆေးများနှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းကို နှလုံးရောင်ရောဂါနှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပွားသော ဆားနှင့် ရေဓါတ် များခြင်း ( ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ကုသရန်လည်း အသုံး ပြုသည်။
Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Indapamide ကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်ပါ။ ဆေးအချိုးအစားကို သေချာသိရန် ဆေး၌ ပါသော စာများကို စစ်ပါ။
Indapamide ကို အစာဖြင့် သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ ပါးစပ်မှ သောက်ပါ။ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း ဖြစ်ပါက အစာအိမ်ရောင်ခြင်း သက်သာစေရန် အစာဖြင့် သောက်ပါ။
Indapamide သည် ဆီး ပမာဏကို များစေသည်။ သို့မဟုတ် ပထမ စသောက်ချိန်တွင် ဆီး မကြာခဏ သွားစေသည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်စက်မှုကို မထိခိုက် စေရန် ညနေ ၆ နာရီ မတိုင်မီ သောက်ပါ။
သင့်သည် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် Indapamide သောက် နေရပြီး ဆေးသောက်ရန် မေ့သွားပါက ထိုနေ့တွင် ပင် သတိရသော အချိန်တွင် ပြန်သောက်ပါ။ နောက် နေ့အထိ သောက်ရန် သတိမရပါက မေ့သွားသော ဆေးကို ကျော်လိုက်ပါ။ တစ်ချိန်တည်း နှစ်လုံး မသောက်ပါနှင့်။
Indapamide ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ မေးလိုပါက ဆရာဝန် အား မေးမြန်းပါ။
Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Natrilix® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Natrilix® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Natrilix® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Natrilix® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင့်တွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက indapamide ကို မသုံးပါနှင့်။
Indapamide တွင်ပါသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် sulfonamide ဆေး ( ဥပမာ- sulfamethoxazole) နှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက
သင်သည် ketanserin သောက်နေပါက
သင့်တွင် ထိုအရာတို့ တစ်ခုခုရှိပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ပါ။
အရေးကြီးသော ဘေးကင်းမှု အချက်များမှာ
Indapamide သည် မူးဝေခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ငန်းဖမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အမြင်ဝေဝါးခြင်းကို ဖြစ်စေ သည်။ ထိုဆိုးကျိုးများသည် ဆေးကို အရက် သို့မဟုတ် အချို့ဆေးများနှင့် အတူသောက်သော အခါ ပိုဆိုးနိုင်သည်။ indapamide ကို သတိနှင့် အသုံးပြုပါ။ ဆေးသောက်ပြီး သင်ဘယ်လို တုံ့ပြန်မည်ကို မသိဘဲ ကားမောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ဘေးကင်းမှု မရှိသော လုပ်ငန်းများ မလုပ်ပါနှင့်။
Indapamide သည် မူးဝေခြင်း၊ ငန်းဖမ်းခြင်း သို့မဟုတ် သတိလစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အရက်၊ ရာသီဥတု ပူခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အဖျားတက်ခြင်း သည် ထိုဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေသည်။ ၎င်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် အထူးသဖြင့် နံနက်ပိုင်းတွင် ထိုင်ခြင်း ထခြင်းကို ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ။ ထိုဆိုးကျိုးများ စပေါ်ပေါ်ချင်း ထိုင်ပါ သို့မဟုတ် လဲလျောင်းလိုက်ပါ။
သွေးတိုးခြင်းအတွက် ဆေးသောက်နေရသော လူနာ များသည် ကုသမှု စတင်ပြီး သီတင်းပတ် အနည်းငယ် အတွင်း မောပန်းခြင်းကို မကြာခဏ ခံစားရသည်။ သင် ပုံမှန် မခံစားရလျှင်ပင် ဆေးသေချာ သောက်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာ အသစ်များ ပေါ်လာပါက ဆရာဝန် အား ပြောပါ။
ဆရာဝန်သည် သင် indapamide သောက်နေစဉ် သင်၏ သွေးတွင်း လျှပ်လိုက်ပျော်ရည် ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။ လျှပ်လိုက်ပျော်ရည် မမျှတမှုကို စစ်ဆေးရန် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဆီးသွားမှု နည်းခြင်း၊ ပါးစပ်ခြောက်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန် သံမြန်ခြင်း သို့မဟုတ် မမှန်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ စိတ်မငြိမ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်းတို့ ခံစားရပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းပြောပါ။
ဆရာဝန်သည် သင့်အား ပိုတက်စီယမ် ထောက် ပံ့မှုသောက်ရန် ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ညွှန်ကြား ပါက ဆေးအချိုးအစားကို သေချာဂရုစိုက်ပါ။ သင့် သဘောဖြင့် ပိုတက်စီယမ်များ ထပ်သောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် အရင် မစစ်ဆေးဘဲ ပိုတက်စီ ယမ် ပိုများစွာပါသော အစားအစာများ ပြောင်းလဲ စားသောက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
Indapamide သည် နေလောင်ခြင်းကို ပို၍ လွယ်ကူစွာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ indapamide ကို သင်ဘယ်လို တုံ့ပြန်သလဲ မသိမချင်း နေ၊ နေကဲ့သို့ ပူသော မီးအိမ် သို့မဟုတ် နေပူလောင်သော ယာယီတဲတို့ကို ရှောင်ပါ။ အချိန်အတန်ကြာ အပြင်ထွက်ရမည် ဆိုပါက နေလောင်ခံခရမ် လိမ်းပါ သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးသော အဝတ်တို့ကို ဝတ်ဆင်ပါ။
သင်သည် ဆေးကုသမှု၊ သွားကုသမှု၊ အရေးပေါ် ကုသမှု သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်မှု မခံယူမီ indapamide သောက်နေသည်ကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သွားဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
ဆီးချိုသွေးချိုလူနာများ။ indapamide သည် သွေးတွင်းသကြားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သွေးတွင်းသကြား ပမာဏကို သေချာ စစ်ဆေးပါ။ ဆီးချိုသွေးချို ဆေး အချိုးအစားကို မပြောင်းလဲမီ ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
Indapamide သည် အချို့ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများကို နှောင့်ယှက်သည်။ သင် indapanide သောက်နေ သည်ကို ဆရာဝန်နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း အမှုထမ်းအား ပြောပြပါ။
သွေးတွင်း လျှပ်လိုက်ပျော်ရည်၊ ဂလူးကို့စ် နှင့် uric acid ပမာဏများ၊ အသည်းလုပ်ငန်း စသော ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှုများကို indapamide သောက်နေစဉ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဤစစ်ဆေးမှုများကို သင့် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများကို စစ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆရာဝန် နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း ချိန်းဆိုမှုများ အားလုံးကို သေချာ လိုက်နာပါ။
အသက်ကြီးသူများတွင် indapamide ကို သတိဖြင့် အသုံးပြုပါ။ သူတို့သည် အထူးသဖြင့် သွေးတွင်း ဆိုဒီယမ် သို့မဟုတ် ပိုတက်စီယမ် နည်းခြင်း စသော ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ ခံစားရလွယ်သည်။
Indapamide ကို ကလေးငယ်များတွင် အထူး သတိပြု၍ အသုံးပြုသင့်သည်။ ကလေးငယ်များတွင် ဘေးကင်းမှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အတည်ပြု ထားခြင်း မရှိပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ရလာပါက ဆရာဝန်အား ဆက်သွယ်ပါ။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ်တွင် indapamide သောက်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သည်။
ဤဆေးသည် မိခင်နို့တွင် တွေ့ရသလား မသိရှိပါ။ indapamide သောက်နေစဉ် ကလေးနို့တိုက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးများအားလုံးသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင် သော်လည်း လူအများစုတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်ပါ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာ ဖြစ်သည်။ အောက်ပါ အဖြစ်အများဆုံး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရပါက ဆရာဝန် နှင့် ပြသပါ။
မူးဝေခြင်း သို့မဟုတ် ထိုင်၊ထ ရာတွင် ငန်းဖမ်းခြင်း
အောက်ပါ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ် လာပါက ဆေးကုသမှု အမြန်ခံယူပါ။
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်သည့် တုံ့ပြန်မှုများ ( အဖုအပိမ့်များထွက်ခြင်း၊ အင်ပျဉ်၊ ယားယံခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ် တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း သို့မဟုတ် လျှာ ရောင်ခြင်း)
ဆီးသွား နည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးသွားမှု ပြဿနာများ
အဖျားတက်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် လည်ချောင်းနာခြင်း
လက်၊ ခြေ ထုံခြင်း
အရေပြား နီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဖောင်းကြွခြင်း၊ အလွှာလိုက်ကွာခြင်း
ပြင်းထန်စွာ သို့မဟုတ် ဆက်တိုက် မူးဝေခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း သို့မဟုတ် ငန်းဖမ်းခြင်း
လက်၊ ခြေကျင်းဝတ် ၊ ခြေထောက် ရောင်ခြင်း
သွေးတွင်း ပိုတက်စီယမ်နည်းသည့် လက္ခဏာများ ( ဥပမာ- နှလုံးခုန်သံ မမှန်ခြင်း၊ ကြွက်သား နာကျင်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း)
သွေးတွင်း ဆိုဒီယမ် နည်းသည့် လက္ခဏာများ ( ဥပမာ- စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ နှေးကွေးလေးလံခြင်း)
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အညိုမဲစွဲခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ မောပန်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်း
ဤစာရင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အားလုံး မပါဝင်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါက ဆရာဝန်အား ဆက်သွယ်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များအတွက် ဆေးပညာ အကြံညဏ် ရရန် ဆရာဝန်အား ခေါ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Natrilix® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
Indapamide နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးအချို့မှာ-
စတီးရွိုက် မပါသော အရောင်ကျဆေး ( ဥပမာ- ibuprofen)။ indapamide ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု ကို လျော့ကျစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors ( ဥပမာ- enalapril) ။ ကျောက်ကပ် ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Diazoxide ။ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်များခြင်း၊ uric acid ပမာဏ များခြင်း သို့မဟုတ် သွေးပေါင်ချိန်ကျ ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Adrenocorticotropin hormone (ACTH) သို့မဟုတ် corticosteroids (ဥပမာ- prednisone)။ indapamide ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
Amantadine, antineoplastic agents ( ဥပမာ- cyclophosphamide), digitalis glycosides ( ဥပမာ- digoxin), ketanserin,lithium, သို့မဟုတ် အခြား သွေးပေါင်ချိန်ဆေးများ။ indapamide သည် ထိုဆေးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Natrilix® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Natrilix® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။ ထိုကျန်းမာရေး အခြေအနေများမှာ-
နှလုံးရောဂါများ ( ဥပမာ- နှလုံးခုန်သံ မမှန်ခြင်း၊ နှလုံး ပျက်စီးခြင်း)
အသည်းရောဂါများ ( ဥပမာ- အသည်းခြောက်ခြင်း)
သွေးတွင်း ဆိုဒီယမ် သို့မဟုတ် ပိုတက်စီယမ် ပမာဏ နည်းခြင်း
ဆိုဒီယမ်နည်းသော အစားအစာ စားသောက်မှု
အာရုံကြော ခွဲစိတ်မှု ကုထုံး
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက် စတင်သင့်သော ပမာဏမှာ ၁.၂၅ မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် နံနက်ပိုင်းတွင် သောက်ရန် ဖြစ်သည်။ လေးပတ်ပြီးနောက် ၁.၂၅ မီလီဂရမ်အား တုံ့ပြန်မှုကို ကျေနပ်ခြင်း မရှိပါက တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် ၂.၅ မီလီဂရမ် သို့တိုးသောက်နိုင်သည်။
လေးပတ်ပြီးနောက် ၂.၅ မီလီဂရမ်အား တုံ့ပြန်မှုကို ကျေနပ်ခြင်း မရှိပါက တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် ၅ မီလီဂရမ်သို့ တိုးသောက်နိုင်သည်။ သို့သော် အခြား သွေးတိုးကျဆေး ထပ်ပေါင်းသောက်ရန် စဉ်းစားသင့်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက် စတင်သင့်သော ပမာဏမှာ ၂.၅ မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် နံနက်ပိုင်းတွင် သောက်ရန် ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်ပြီးနောက် ၂.၅ မီလီဂရမ်အား တုံ့ပြန်မှုကို ကျေနပ်ခြင်း မရှိပါက တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် ၅ မီလီဂရမ် သို့တိုးသောက်နိုင်သည်။
သွေးတိုးသည် လုံလောက်စွာ မကျပါက indapamide ကို အခြား သွေးတိုးကျဆေးများဖြင့် ပေါင်းပေးနိုင်သည်။ သွေးပေါင်ချိန်ကို သေချာ စောင့်ကြည့်ရန်လိုသည်။
အစပိုင်း ပေါင်းပေးခြင်းကုထုံးတွင် အခြားဆေး များ၏ ပမာဏကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချထားရန် အကြံပြုပါသည်။ သွေးပေါင်ချိန် တုံ့ပြန်မှု ထင်ရှားလာသည်နှင့်အမျှ ဆေးပမာဏ ချိန်ညိခြင်း များ နောက်ထပ် လိုအပ်နိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ၅မီလီဂရမ်နှင့် အထက် ဆေး ပမာဏ များသည် သွေးပေါင်ချိန် သို့မဟုတ် နှလုံးပျက်စီးခြင်းကို ထပ် ပေါင်းသက်ရောက်မှုများ မဖြစ်စေပါ။ သို့သော် သွေးတွင်း ပိုတက်စီယမ်နည်းခြင်း ဖြစ်စေသည်။ တစ်နေ့လျှင် ၅ မီလီ ဂရမ်ထက်ပို သောက်သော လူနာများတွင် ဆေးဝါး စမ်းသပ် မှု အတွေ့အကြုံ အနည်းငယ် ရှိသည်။
ကလေးတွေအတွက် Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Natrilix Sr (နက်ထရီလစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Natrilix® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
Natrilix® ၂.၅ မီလီဂရမ် ဆေးပြား
Natrilix® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Indapamide.https://www.drugs.com/cdi/indapamide.html. Accessed November 11, 2016
Natrilix® (indapamide) 2.5mg tablets.https://www.drugs.com/uk/Natrilix® (indapamide) -2-5mg-tablets-leaflet.html.Accessed November 11, 2016
Indapamide.http://www.webmd.com/drugs/2/drug-12360/indapamide-oral/details.Accessed November 11, 2016.